> Resource > Video > HD Video Player: Sida loo Play HD Video
Sare-qeexidda video (HD video) waxaa loola jeedaa nidaam kasta oo video ah oo xal ka badan heerka-qeexidda (SD) video. Go'aamada bandhigay caadiga ah waxaa ka mid ah 1.280 x 720 pixels (720p) ama 1.920 x 1.080 pixels (1080i / 1080p). Marka la barbar dhigo SD video, HD video ka dhigaysa faa'ideysatay oo aad bandhigay computer inta aad sanamyada ugu fiican aad leedahay si aad u aragto in ay rumaysan yihiin waxay keentaa.
Si aad ku raaxaysan buuxa HD filim daawashada on your computer, waxaad u baahan tahay oo ah video ciyaaryahan HD. Halkan awood HD video player- Wondershare Player - si weyn lagu talinayaa. Waa ciyaaryahan FREE ah ee qof walba. Marka u ciyaara aad HD video, ciyaaryahankaan qaadataa DHCP yar halka abid ugu cajiib ah u qabata. Waa maxay dheeraad ah, qaababka dheeraad ah sida buuxda u taageersan subtitles iyo track audio ayaa la hubaa inay samatabbixin daawashada tayo sarreeya iyo waayo-aragnimo la dhageysto. Hadda ka soo dejisan iyo arko sida loo ciyaaro HD video la.
1 Download iyo rakib
Download this ciyaaryahan HD video free ka this page, ka dibna loo soo dajiyo iyo abuurtaan codsiga.
Si toos ah jiidi jeedi HD video barnaamijka si aad u furto ama riix "Open File" button dooro video HD bartilmaameedka. Waxa kale oo aad dooran kartaa "_1_281_1 _"> File "biddix ee kore ee interface ugu weyn iyo dooro" File Open "in la furo HD video.
3 Ma Settings Qaar ka mid ah haddii loo baahdo
Wondershare Player Bixisaa muuqaalada dheeraad ah oo aynu aad si buuxda u xakameeyo aad loo maqli karo:
Midig u guji meel kasta oo ka mid interface halka aad video la ciyaaray. Markaasay aad samayn karto goobaha dheeraad ah iyo isbedel, sida dari files ka badan, subtitles dooro iyo nooca audio, cutubka dooran inuu u ciyaaro, hab is bedel loo maqli karo iyo in ka badan.
Features badan oo ku saabsan Wondershare Player:
Ka sokow qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah, Wondershare Player waxay bixisaa in ka badan in ay ku siiyaan run iidda HD video daawashada aad had iyo jeer ku riyoonaya in ay:
Play All Videos HD la Just One Player
Wondershare Player Taageertaa loo maqli karo ee aad HD video content oo dhan, sida M2TS, AVCHD, mod, MKV (format ugu caansan oo universal HD warbaahinta weel), iyo qaar kaloo badan. Haddaba waxaa idin badbaadin karin ugu yaraan kala bar sano ah oo dheeraad ah loo helo ciyaartoy video.
Talo: Haddii aad doonayso inaad si loogu badalo qaab video mid HD in kale, u isticmaal Wondershare Video Converter.
Best Quality Video Balanqaad
Wondershare Player Leeyahay codecs sare si loo soo celiyo iyo nadiifin ugu crystal-cad image aad HD video. Waxaa ciyaara oo dhan HD video aad cajiib u soomi, oo siman oo aan marnaba hoos HD video tayada asalka ah.
Horyalka Talyaaniga iyo Smart naqshado keena Fun More
Tani video ciyaaryahan HD caqli sidoo kale waxay bixisaa naqshado dheeraad ah oo dareen leh iyo qaababka aad video daawado. Waxaa dib files ka xaq meesha aad iska daayeen, auto ku darayaa files la mid ah playlist ah, oo ansixiyay taariikhda aad loo maqli karo iyo computer auto xiritaanka ka dib markii loo maqli karo haddii aad kaliya magacaabo choose- dhowr ah